I-Instagram ivavanya ukusasazeka bukhoma phakathi kwabantu ababini | IPhone iindaba
Okwangoku uninzi lwezona zicelo zisetyenzisiweyo zisivumela sobabini ukuba senze iminxeba yevidiyo kwaye senze usasazo ngqo, Ifomathi yenziwa sisicelo se Meerkat Kwaye yamkelwa kwindawo yokuqala nguTwitter, yaba sisiqonga sokuqala esinikezela kuluntu ngokubanzi. Emva kwexesha kwafika uFacebook, uYouTube nabanye.
Kodwa i-Instagram ifuna ukuya kwelinye inyathelo kwaye iyavavanya phakathi kweqela elivaliweyo labasebenzisi okanyeUmsebenzi omtsha ovumela usasazo ngqo phakathi kwabantu ababini. Lo msebenzi unokuba ngumdla ukuba sidiniwe kukusoloko sibona ubuso obufanayo xa sibukele uhlobo oluthile losasazo lolu hlobo.
Njengoko sibona kumfanekiso ophambili kweli nqaku, abantu ababini abathatha inxaxheba kusasazo Ziza kuvela ngokwahlula-hlula isikrini ngelixa zonke izimvo ziya kuboniswa ukusuka ezantsi ngasekhohlo Abantu ababukeleyo mababhale phantsi. Lo msebenzi uqalile ukubakho phakathi kwabanye abasebenzisi, ke ukuba ungumsebenzisi oqhelekileyo wenethiwekhi yoluntu ye-Instagram, kusenokwenzeka ukuba lo msebenzi unokwenziwa namhlanje ukuze ukwazi ukuwuzama.
Ukujonga ukuba unalo msebenzi owenziweyo kulula kakhulu, kuba kufuneka uye ngasekunene ezantsi kwekhusi kwaye ujonge ukuba iyavela na i icon entsha enobuso obunye. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ucinezele ukuvula uluhlu lwabafowunelwa abakhoyo, khetha lowo ufuna ukumema kwaye uqalise ukusasaza ividiyo ebukhoma phakathi kwabo bonke abasebenzisi bakho.
Okwangoku kuphela kwesithintelo esinikezelwa yile nkonzo sifumaneka ngexesha lokuhanjiswa kwakhona, ixesha eliqingqiweyo kwimizuzu engama-60. Emva koko nakwiiyure ezingama-24 ezizayo, bonke abalandeli baya kuba nakho ukufikelela kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » I-Instagram ivavanya ukusasazwa bukhoma phakathi kwabantu ababini